Fanafainganana ny fampandrosoana ny vokatra / Createproto - Createproto Tech Co., Ltd.
INDUSTRIES / Fitsaboana
Manafaingana ny fanavaozana ny fitaovana fitsaboana
Ny fahavitana haingana sy mahomby amin'ny fitsapana ara-pahasalamana dia fepetra takiana amin'ny fahombiazan'ny vokatra ara-barotra. Ny prototyping fitaovana fitsaboana dia zava-dehibe amin'ny famolavolana ny vokatra ara-pitsaboana sy ny fizotranao amin'ny fampandrosoana. Azonao atao ny mampiditra azy ireo any amin'ny laboratoara na fitsapana amin'ny klinika ary amin'ny farany hamidy haingana.
CreateProto dia manolotra vahaolana feno amin'ny prototyping sy famokarana haingana ho an'ny sehatry ny fitsaboana. Manomboka amin'ny fitaovana tanan'ny tanana ka hatrany amin'ny tobim-pitsaboana vaventy dia manolotra serivisy prototyping fitaovana fitsaboana feno avy amin'ny model validation amin'ny maodely sy ny fitsapana prototypa miasa ho an'ny famokarana volavola ambany izahay amin'ny vidiny mahomby sy fandefasana haingana kokoa.
Ny iray amin'ireo orinasam-pampandrosoana fitaovana fitsaboana manerantany dia mitodika any amin'ny CreateProto hamaha ny tombotsoan'ny maodelin'ny famokarana dizitaly. Manomboka amin'ny fitaovana mifandraika ka hatramin'ny personalization marobe ny vokatra ara-pahasalamana, ny famokarana dizitaly dia manafaingana ny fampandrosoana sy ny fampidirana tsena amin'ny alàlan'ny prototyping haingana, fampitaovana tetezana ary famokarana ambany.
Fa maninona no mampiasa createProto ireo orinasam-pampandrosoana fitaovana fitsaboana?
Fanadihadiana momba ny endrika iraisana
Manaova fanitsiana famolavolana kritika izay mamonjy ny fotoana sy ny vidin'ny fampandrosoana miaraka amin'ny famolavolana ny valin'ny fanamboarana (DFM) isaky ny teny nalaina.
Makà ampahany amin'ny famokarana ambany haingam-pandeha haingana tahaka ny 1 andro hanamorana ny firaketana ny famatsiana indray mandeha mialoha sy aorian'ny famoahana ny vokatra eny amin'ny tsena.
Fitaovana tetezana alohan'ny famokarana
Manararaotra fampitaovana tetezana mora vidy ho an'ny famolavolana sy ny fanamafisana ny tsena alohan'ny fampiasam-bola amin'ny fitaovana.
Safidio ny plastika maripana avo lenta, ny silipo vita amin'ny silika misy medika, ary ny faritra misy ny micro-résolution ary microfluidic misy 3D, miaraka amin'ireo akora plastika, vy ary elastomerika hafa.
Ny teknolojia famokarana marobe manerana ny serivisy efatra dia midika fa ny faritrao dia ampiarahina amin'ny fitaovana sy dingana mety na inona na inona ilain'ny tetik'asa.
Mamorona prototypes amin'ny fitaovana maodely famokarana ho an'ny fanandramana miasa sy fanaraha-maso, na maodely fanontana 3D sy scan'ny taova hijerena mialoha ny fomba fitsaboana.
Famolavolana tsindrona fitsaboana
Ny famolahana tsindrona haingana dia manome safidy tsara kokoa ho an'ireo mpanamboatra fitaovana ara-pitsaboana mila faritra bobongolo kely. Hahafeno ny filanao amin'ny famakafakana famokarana, fitsapana injeniera, fanombanana ara-pahasalamana, fampisehoana ireo mpampiasa vola na fahavononan'ny famokarana amin'ny dingana manaraka amin'ny fampivoarana ny vokatra ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana. Mandritra izany fotoana izany dia ho afaka hampifandray ny elanelana misy eo amin'ny prototype sy ny famokarana izy, ary hamela ny olana rehetra ho hita sy ahitsy alohan'ny hamindrana azy ireo amin'ny famokarana.
Fanafainganana ny fampivoarana ny fitaovana FDA Kilasy I sy II, na singa tsy azo ampidirina, miaraka amin'ny fahafaha-mamolavola tsindrona fitsaboana antsika, izay misy ny fitaovana vy, ny efitrano madio ary ny fanamarinana kalitao ISO 13485.
Fanontana 3D manosika ny fanavaozana amin'ny indostrian'ny fitsaboana
Miaraka amin'ny fanontam-pirinty 3D, ny haitao prototyping haingana sy ny famokarana additive dia mitohy hatrany, ary miteraka fahafaha-manao sy zava-misy mahavariana ho an'ny sehatry ny fitsaboana. Ny fanaovana pirinty 3D dia fizotra fametrahana lay izay mamela ny singa tsirairay hamokatra haingana. Ity fomba prototyping haingana ity dia mamela ny famerimberenana haingana sy tsy lafo ny famolavolana ho an'ny debugging mahomby. Ny tombony lehibe indrindra amin'ny fanontam-pirinty 3D dia manome endrika marina sy fitiliana mety satria ny fizotran'ny teknolojia fampidirana dia afaka mamokatra marina ny endrika sy ny haben'ny ampiana tadiavina, ka tena ilaina amin'ny fanombanana mialoha ireo faritra fitsaboana vaovao.
Machining Precision an'ny CNC ho an'ny fitaovana sy ampahany amin'ny fitsaboana
Angamba tsy misy teknolojia hafa afaka mitana andraikitra lehibe amin'ny famokarana avo lenta sy mandefitra toa ny machining CNC. Createproto dia manam-pahaizana amin'ny serivisy famolavolana prototype CNC amin'ny indostrian'ny fitsaboana, mifantoka amin'ny modely famolavolana sary hita maso sy ireo prototypie enti-miasa feno. Avy amin'ny milina CNC 3-axis ho an'ny faritra ara-pitsaboana tsotra na hazakazaka fohy, mankany amin'ny fikirakira 5-axis malefaka ho an'ireo singa ara-pahasalamana vita amin'ny milina, ireo fahaiza-manao fanodinana ireo dia ahafahan'ny ekipa mihazakazaka haingana milina plastika sy vy amin'ny fomba mahomby sy lafo.
Alohan'ny hifindranao amin'ny fanontana 3D amin'ny sehatry ny fitsaboana, etsy ambany ny tombony azo amin'ny milina CNC, ary rehefa io no tena ilaina:
Safidy ara-materialy maro karazana, ao anatin'izany ny plastika misy naoty na metaly isan-karazany.
Marina sy azo averina ary feno ary feno pitsopitsony sy ny antsipiriany.
Fihodinana haingana, ny milina CNC dia azo alefa mandritra ny 24 ora raha vantany vao vita ny fametrahana.
Famokarana singa manokana ho an'ny serivisy fanodinam-panafody, isa hatramin'ny 100000.
Fanariana Urethane ho an'ny fanavaozana kely amin'ny vokatra ara-pitsaboana
Fahafahana sy fampiharana marobe no mahatonga ny famoahana polyurethane ho fanerena amin'ny indostrian'ny fitsaboana. Azonao atao ny mampiasa casting urethane ho an'ny fanombohana ny vokatra voalohany alohan'ny famolavolana tsindrona sy fitaovana ho an'ny fikarohana eny an-tsena sy ny hevitry ny mpanjifa, ary koa ny fanaterana fitaovana fitsaboana. Ho an'ny tsena izay fanabeazana kely dia kely ary fohy ny fiainam-pamokarana, ny famolavolana silicone hanariana urethane dia ahafahan'ny mpanamboatra manatsara ny endrik'izy ireo amin'ny hafainganam-pandeha haingana kokoa nefa tsy mila manonitra ny vidin'ny fitaovana mafy.
Ny ekipa manampahaizana manokana an'iPrototo dia manolotra serivisy fanariana fantsona tena tsara ho an'ny prototypes plastika fitaovana ara-pahasalamana, ary manampy anao hahatanteraka ny fifandanjana mety eo amin'ny faritra avo lenta sy fampiasa farany ary ny fotoana famokarana. Midika izany amin'ny fotoana sy fitsitsiana vola ho an'ny mpanjifa mitady fisondrotam-bidy amin'ny fizahana endrika sy ny fizahana asa, ny marketing mialoha, na koa ny safidy famokarana ambany.
Inona avy ireo fitaovana mety indrindra amin'ny fampiharana ara-pahasalamana?
Plastika avo lenta. PEEK sy PEI (Ultem) dia manolotra fanoherana amin'ny hafanana avo lenta, fanoherana mandady, ary mifanaraka amin'ny rindranasa mila sterilization.
Vola vita amin'ny silipo vita amin'ny fitsaboana.Dow Corning's QP1-250 dia misy fanoherana hafanana, simika ary elektrika tena tsara. Izy io koa dia mifanaraka amin'ny biolojika ka azo ampiasaina amin'ny rindranasa izay mila fifampikasohana amin'ny hoditra.
Carbon RPU sy FPU. Carbon DLS dia mampiasa fitaovana polyurethane henjana sy semi-hentitra mba hananganana faritra azo ampiasaina tsara ho an'ny prototyping na fampiasa farany.
Microfluidics. Watershed (toy ny ABS) sy Accura 60 (toy ny PC) dia fitaovana mazava azo ampiasaina amin'ny ampahany microfluidic sy singa mangarahara toy ny lantom-peo sy trano.
Alloys fitsaboana.Eo anelanelan'ny metaly vita amin'ny milina sy 3D vita pirinty miaraka amin'ny vy metaly, misy mihoatra ny 20 ny safidy metaly azo ampiasaina amin'ny singa ara-pitsaboana, fitaovana sy fitaovana hafa. Ny metaly toy ny titanium sy Inconel dia manana toetra toy ny fanoherana ny mari-pana raha ny fitaovana vy tsy misy fangarony kosa mitondra fanoherana sy tanjaka an-kibo.
Manana fahaiza-manao marobe ao anatin'ny serivisinay sy ny zotram-pifaneraserantsika mifantoka amin'ny indostrian'ny mpanjifa sy ny solosaina informatika. Ny sasany amin'ireo fampiharana mahazatra dia misy:
Prototypes tsy azo ovaina
Singa amin'ny fivarotan-tena
"Namboarina tao anaty volavolainay sy ny fizotran'ny R&D aminay izao ... Mora amiko kokoa ny manafatra lasitra iray ho an'ny ampahany amin'ny fitaovana fitsaboana (avy amin'ny CreateProto) noho izaho handoa ny trosako an-tserasera."
- Tom, Smith, talen'ny famolavolana
Cnc Prototyping, Prototyping haingana, Serivisy fanaovana pirinty 3d sy Prototyping haingana, Prototyping haingana sy famokarana, Cnc Prototyping haingana, Prototyping haingana,